Madaxweyne Yuusuf oo la sheegay in uu kula heshiiyay maamulka cusub ee uu Hiiraan u magacaabay in gobolka Hiiraan la hoos geeyo maamul goboleedka Puntland, qaar ka tirsan taageerayaasha Ra'isul wasaare Geeddi oo 10 qori ku wareejiyay Salaad Cali Jeelle Maanta iyo dagaal sokeeye oo la filayo in uu ka qarxo magaalada Muqdisho. Ruunkinet 03/01/07
Warar lagu kalsoon yahay oo ka immaanaya magaalada Baydhabo ayaa ku waramaya in madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu kula heshiiyay qaar ka tirsan maamulka cusub ee uu u magacaabay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne in gobolka Hiiraan lagu daro maamul goboleedka Puntland.
Arrinta ayaa la sheegay in ay ku jiraan odayaal ka tirsan gobolka Hiiraan ayagoo markiisi la sheegay in loo balan qaaday dhaqaalo mug leh.
Maamul goboleedka Puntland ayaa la sheegay in uu raadinayo gobolla kale oo ka tisan gobollada dhexe in ay ku biiraan maamul goboleedka Puntland.
Dhanka kale, hub lagu sheegay in uu dhan yahay 10 qori iyo maleeshiyadii maamulayey hubkaasi ayaa maanta lagu wareejiyay wasiir ku xigeenka gaashaan dhigga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Mudane Salaad Cali Jeelle oo halkaasi kula hadlanay kooxda hubka ku wareejisay isla markaana ka tirsan beesha uu ka soo jeedo ayaa sheegay in lagu daydo kooxdaasi beelaha kalane ay ku soo wareejiyaan asaga hubka gacanta ugu jira.
Sidoo kale, ra'isul wasaare Geeddi iyo Salaad Cali Jeelle ayaa sheegay in berrito ay ku egtahay digniintii loo jeediyay dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo Shabeelada Hoose ayna taageerayaasha ra'isul wasaaraha iyo ciidamada dowladda Itoobiya ay guriha ugu geli doonaan dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo Shabeelada Hoose si ay hubka ugu dhigaan.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in magaalada Muqdisho laga yaabo in uu ka dhaco dagaal sokeeye ayadoo durbaba uu Qanyare sheegay in 3 maalmood ay yartay in hubka looga qaado shacabka.
Ra'isul wasaare Geeddi iyo Salaad Cali Jeelle ayaa si weyn u doonaya in taageerayaashooda hubka lagu soo wareejiyo inta ay ciidamda Itoobiya joogaan dalka.